"Malaa'igta Dooxada " by Patti Sassy Angel Chiappa, Paperback | Barnes & Noble® B&N Top 100 NY Times Bestsellers
"Malaa'igta Dooxada "
Qiyaastii 1 in 3 qof doonin kansarka ee noloshooda . Fursadda in aad xaq u leedahay hadda taqaan qof . Waxaa jira buugaag badan oo ku saabsan kansarka talo qurbaan iyo taageero , laakiin Malaa'igta oo dooxadii ma aha oo kaliya dhab daraasad Bible in uu isticmaalaa erayga Ilaah in ay waajahaan xaqiiqada kansarka halka hagaya akhristaha galay iimaan qoto dheer , Laakiin buug ka buuxaan khayraadka waxtar leh in dardaaran way ku caawin in aad si . Haddii stage of shaki , daaweynta , dembidhaafka , ama dhammaadka nolosha , waxaad ogaan doontaa inay jawaabo kitaabiga ah si kansarka . Qaar ka mid ah arrimaha laga wada hadlay waxay kala yihiin: Ujeedada in xanuunka , raaxada ee dhibaatada , brokenness , runta ah ee Ilaah ee la , xorriyadda iyada oo cibaadada , aqbalaada , hooskii dhimashada , iyo raadinta raalli lagu yahay .
Mid kasta oo ka casharo iimaan - ka dhergiyey, Axmaduu aragtiyo sharraxaadda , Xaqiiqooyinka kitaabiga ah , iyo farsamooyinka lagula qabsanayo . Diyaar u noqo in la dhiiri , aqoon leh , qalbi qaboojiyo , iyo inaad meeshooda . Tixraacyada iyo qoraaladu iyo symbolisms waxaa loo isticmaalaa in la sinnaan duruufahaaga gaarka ah si ay u bixiyaan haboonaan weyn . Isticmaalka waayo-aragnimada aan la kansarka , caadifadaha daacad ah , diiddani shakhsi , iyo xal Ilaah - xuddun u yihiin sahamiyey . Su'aalo iyo jawaabo , jimicsiyada fudud , afkaar meditative , iyo sahaminta ee dareenkooda ku lug akhristaha leh cashar kasta lagu caawiyo si looga yareeyo xanuunka kansarka iyo in la wanaajiyo mid guud iyo ruuxi ah fayo-qabka .
Haddii Masiix waa xarunta ah ee jiritaanka ama goob jooge ah fog , burburka kansarka waa isku mid . Haddii lagu helo kansarka ama waxaa lagu taageeraya qof , daraasaddan waxa loogu talagalay adiga . Hadiyad A ee dhiirigelin qof kale ama boost a hushiisiineed iyo naftaada , daraasaddan waxay bixisaa dose maalinle ah oo dawada ruuxi ah si ay nafta u naxaysaan oo dejiyo .
Qayb ka mid ah faa'iido this ee sale kasta si Farber Fund Dana ku tegi doono caawinta dadka qaba kansarka .